Akụkọ kachasị ọhụrụ banyere Nchịkwa FCT si Nigeria & ụwa | TAA
Home Tags Gọọmentị FCT
Ndị obodo Abuja na-atụ egwu imegide nnupụisi banyere mbuso ala
Ndị obodo nke Federal Capital Territory (FCT) dọrọ aka ná ntị megide ịnọgide na-ekenye ala ndị nna ha site n'aka gọọmenti FCT maka ndị mmepe nke onwe ha.
FCT: ndị Gosa na-eme mkpọtụ ahịa
Ụfọdụ ndị bi na Gosa, bụ obodo dị na Airport Road, Abuja, na Monday mere ka a mata mkpesa megide mkpọmkpọ ahịa nke Ahịa ha site n'aka Nchịkwa FCT.
UNICEF na-achọ nkwado nke Aisha Buhari iji kpochapụ mmegbu ụmụaka
Otu United Nations Children's Education Educational Fund (UNICEF) gbara Nwanna Aisha Buhari, nwunye nke onyeisi oche, arịrịọ ka ya na ya na-akwado ikike na ọganihu mmụta nke ụmụaka ụmụ amaala Nigeria.
Ndị obodo Abuja na-adọ aka ná ntị megide iwu nke ụlọ iwu na-akwadoghị
Ụlọ Nche Abuja Environmental Protection Board (AEPB) na Thursday dọrọ ndị ọbịa bi na Abuja aka ka ha kwụsị imebi obodo ahụ na iwu iwu na-akwadoghị ma ọ bụ nwee ike ibibi ụlọ ndị ahụ.
Abuja Carnival: Ndị na-eche nche na Club Club ka ha nọrọ n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ polo tourney
Mustapha Junaid, onye isi oche nke Abuja Guards Polo Club na Monday kwuru na ụlọ ọrụ ahụ kwadoro iji kwado ihe ịga nke ọma na Abuja Carnival Polo Tournament site na Nov. 22 na Nov. 26.
FRSC na-ezo aka na ndị omekome 4,000 maka ndị na-ahụ maka ọgụgụ isi
Onye uweojii na-ahụ maka nchekwa okporo ụzọ na Sunday kwuru na ọ jidere ma kwuo ndị omempụ 4,000 maka nchọpụta uche na ọnwa atọ gara aga iji mee ka ahụ dị mma na okporo ụzọ FCT.
Ihe kpatara anyi ji kwusi n 'ala nke Abuja - Musa Bello
Minista Federal Capital Territory, Mohammed Musa Bello, kwuru na ụlọ ọrụ FCT ga-achọ N80 ijeri iji nye akụrụngwa na mpaghara ọhụrụ.
Abuja Light Rail amalite ọrụ na December
Ụlọ ọrụ Federal Capital Territory (FCT) kwuru na Abuja Light Rail ga-amalite ọrụ azụmahịa na isi obodo na December, mgbe ụlọ ọrụ China Civil Engineering Construction Company (CCECC) ga-enyefe ya.
Maikanti Baru: NNPC ka na-enwe nsogbu ego
Onye otu na-ahụ maka ndị isi nke National Corporation Petroleum Corporation (NNPC), Maazị Maikanti Baru, kwuru na ego ka bụ ihe siri ike nye ụlọ ọrụ ahụ.
NCC agaghị akwado 9mobile ire ere na bidder na-enweghị ike teknụzụ
Kọmitii Nsonye nke Nigeria (NCC) agaghị akwado nnweta nke 9mobile na onye ọ bụla bidoro na-enweghị ike nlekota oru, onye isi oche onyeisi oche nke ọrụ ahụ, Umar Danbatta kwuru na Monday.
Russia na-egosiputa njikere iji kwado usoro mgbanwe UN
Russia dị njikere ikwekọ na mba ndị òtù UN na yana odeakwụkwọ General Antonio Guterres maka ịhazigharị UN, Konstantin Kosachev, onyeisi oche nke kọmitii ndị isi ụlọ ọrụ Russia nke ụlọ elu, gwara Sputnik na Monday.
Senator Ekweremadu briefs Onye isi oche Osinbajo na izu ohi nwanyi
Onye isi oche Senate, Ike Ekweremadu, kwuru okwu banyere onye isi oche Yemi Osinbajo na Wednesday na mwakpo nke ulo Senate site na onu ndi otu onye omechitere kwadoro, Ovie Omo-Agege, bu.
Gọvanọ nke Ebonyi, Dave Umahi, kwuru Friday ka ọ bụrụ ezumike ọha na eze maka ndị ọrụ obodo iji nweta akaraadị votu na-adịgide adịgide (PVC) n'ihu nhoputa nke 2019.